नेपालमा पनि २ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
नेपालमा पनि २ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि
नेपालमा २ जनामा कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार ६६ वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा आएको ७१ वर्षीय व्यक्तिमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो । ६६ वर्षीय नागरिक ३ मंसिरमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय हवाई नाका प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
उनीहरु दुवैजनालाई ७ मंसिरमा कोभिड पोजेटिभ देखिएको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा आइतबार बेलुका नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उहाँहरु दुवैजना नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘हालसम्म उहाँहरुमा कुनै लक्षण देखिएको छैन र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुनुहुन्छ ।’
उनीहरुको सम्पर्कमा आएका ६६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ आएको उनले जानकारी दिए । २४ नोभम्बर २०२१ मा दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको यो भाइरस हालसम्म ३५ देशमा फैलिसकेको छ भने ५ सय ७४ जना संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
संगठनले गरेको प्रारम्भिक आँकलन अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियामा ओमिक्रोनको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका नेपालसहित केही देशमा यो भेरियन्ट पुष्टि भइसकेको छ । यो भाइरस सर्ने दर र संक्रमणबाट हुने स्वास्थ्य जटिलताका सम्बन्धमा बैज्ञानिक तथ्यहरुको खोज भइरहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा नाकाहरुमा यात्रुहरुको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न सबै यात्रुको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्टलाई अनिवार्य गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । ‘खोपको विवरण लिने, लक्षणको जाँच गर्ने, हवाई तथा स्थल नाकाहरु भई प्रवेश गर्ने पूर्ण खोप नलगाएका र शंकास्पद सबै यात्रुहरुको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एन्टिजेन परीक्षणमा पोजेटिभ फेला परेकाहरुको नमुना संकलन गरी पीसीआर र शंकास्पद नमुनाको जीन सिक्वेन्सिङ गर्ने गरिएको छ भने एक महिना अघि देखि पोजेटिभ भएका नमुनाको थप परीक्षण गरिरहेका छौं ।’
कोभिड–१९ का अरु भेरियन्ट जस्तै ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरुको पालना गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।